Mpanamboatra sy mpamatsy lamina lamba - orinasa mpamokatra lamba laminasiôna China
Sarimihetsika adiresy mafana miempo PA
Ny sarimihetsika dity mafana mihetsiketsika PA dia vokatra azo avy amin'ny sarimihetsika adiresy mafana vita amin'ny polyamide ho akora fototra. Polyamide (PA) dia polymer thermoplastic linear miaraka amina singa miorina amin'ny vondrona amide eo amin'ny hazondamosina molekiola ateraky ny asidra karboksilika sy amina. Ny atôma hydrônôma amin'ny t ...
Horonan-tsary mihetsiketsika mafana amin'ny PA
Ity dia omentum vita amin'ny polyamide, izay novolavolaina indrindra ho an'ireo mpampiasa avo lenta. Ny sehatra fampiharana lehibe indrindra an'ity vokatra ity dia ny akanjo fitafiana avo lenta, fitaovana kiraro, lamba tsy tenona ary fitambaran-damba. Ny tena mampiavaka an'ity vokatra ity dia ny fahaizan'ny rivotra mivaingana. Ity vokatra ity dia ...
PES sarimihetsika mafana mametaka tranokala adhesive
Ity dia omentum vita amin'ny PES. Izy io dia manana firafitry ny harato tena matevina, ahafahany mahazo rivotra miaina tsara. Rehefa ampiarahina amin'ny lamba dia azo raisina ny fifamatorana hery sy ny hafanan'ny rivotra entin'ny vokatra. Matetika izy io dia ampiharina amin'ny vokatra sasany izay mila rivotra somary avo ...